Yaa bixinaayo lacagta mooshinka xilka qaadista lagu bixinaayo Abshir Bukhaari iyo dal carbeed oo gadaal kariixaayo - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Yaa bixinaayo lacagta mooshinka xilka qaadista lagu bixinaayo Abshir Bukhaari iyo dal...
Yaa bixinaayo lacagta mooshinka xilka qaadista lagu bixinaayo Abshir Bukhaari iyo dal carbeed oo gadaal kariixaayo
Waxaa manta magaalada muqdisho sii weyn lagu dareemaya mooshinka ka dhanka ah Gudoomiye kuxigenka aqalka sare ee dalka.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Aqalka sare iyo guddoonkooda ayaa si aad ah u dhaliilay hannaankii guddoomiye ku-xigeenka 1-aaf Aqalka sare Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) uu kaga qeyb galay xafladii caleema saarka oo sabtidii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubbaland.
Xildhibaanadan oo ka kooban 15 oo uu ku jiro guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isla qaatay in maqaamkii uu Abshir Bukhaari kaga qeyb galay xafladaasi ay ahayd mid aan sax ahayn,islamarkaana aanay u dhammeyn Guddoonka Golaha Aqalka sare oo ay ahayd inuu ka qeyb galo guddoomiyaha ama fasaxiisa looga qeyb galo.
Mooshinkaan ayaa la sheegayaa in dowladda Qadar ay dhaqaalo badan ku bixineyso mooshinka Abshiir Bukhaari sidaaa ay no sheegen ilo muhiim ah
Wararka qaar oo aan heleyno ayaa sheegaya in xildhibaanada qaar ay diyaarinayaan soo jeedin (Mooshin) wax looga weydiinayo Abshir Bukhaari guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Aqalka sare sababta kaligiisa uu go’aan u qaabtay inuu ka qeyb galo xafladda caleema saarka Axmed Madoobe oo doorashadiisa ay muran ka taagan tahay.
Abshir Bukhaari ayaa qeyb ka ah mas’uuliyiinta dhaliilsan hannaanka shaqo ee Madaxda Villa Soomaaliya,sidoo kalen wuxuu ka mid yahay mas’uuliyiinta Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed.
Doorashadii Axmed Madoobe ayaa lagu kala qeybsamay,waxaana xafladiisa caleema saarka kaliya ka qeyb galay siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada mucaaradka ah.